Blogspot and post problem. - MYSTERY ZILLION
Blogspot and post problem.
February 2012 edited February 2012 in Blogspot
Blog spot မှာဆိုရင် ပိုစ့်တင်ရင်.. ပုံမပါပဲတင်ရင်... ကိုယ်သတ်မှတ်ထားသလောက်
post ကို Home page မှာ ဖေါ်ပြပေးတယ်ပုံရော စာရော တွဲတင်ရင်ကျတော့ နောက်တစ်မျက်နှာကိုကူးသွားပြီ
older post / newerpost ဖြစ်သွားတာ လဲ ဆိုတာလေး သိချင်တယ်ဗျာ..
line break လည်းသုံးထားပါတယ်ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး အဲ့လို နောက်တစ်မျက်နှာနောက်တစ် page ရောက်သွားလဲဆိုတာသိတဲ လူများဖြေပေးပါဦး
Thanked by3narmanntrac ofalolati illikintann
blogspot မှာဖြစ်ဖြစ် wordpress မှာ ဖြစ်ဖြစ် , page တစ်ခုမှာ post ဘယ် နှစ်ခုပဲ ပြမယ်ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ limit ရောက်သွားရင် older post ကို သွားမှ အခ​ြား old post တွေကို မြင်ရပါမယ်။
content နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ post အရေအတွက်နဲ့ပဲ သက်ဆိုင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး မေးထားတဲ့ မေးခွန်းက ဘာကို မေးချင်လဲဆိုတာ မရှင်းပါ။